I-Lyric T6R, sivavanye i-Honeywell's's thermostat | Iindaba zeGajethi
Amakhaya ethu aya esiba nobulumkoIselfowuni sihamba nathi naphina apho siya khona, ke ukuphucula ukusebenza kwezixhobo zethu zasekhaya enkosi kwi-smartphone yethu yenye into yokuba zonke iingcali kwezedemokhrasi, ekhaya nakwimpilo-ntle zijongeka kakuhle. I-Honeywell eyaziwayo, inkampani enamava eminyaka kunye nokuvunywa kweengcali, ayinakuphoswa kolu luhlu lweemveliso.
Yile ndlela sikwazi ngayo ukufikelela kwifayile ye- I-Lyric T6R, i-thermostat ehlakaniphile eyenziwa ngu-Honeywell kuwo wonke umntu kwaye eya kukuvumela ukuba ufumane induduzo kwaye ulondoloze ekusebenziseni amandla. Makhe sijonge kule mveliso ukuze ufunde ngakumbi malunga namandla kunye nobuthathaka bayo.
Njengamaxesha onke, siza kujongana nazo zonke iinkcukacha ekufuneka zithathelwe ingqalelo ngumthandi wegadidi kwimveliso yolu bungakanani, ukusuka kulwakhiwo ukwenza lula ukufakwa, ukusetyenziswa kunye nomgangatho wesicelo. Ukuqhuba olu hlalutyo kuvavanywa i-Honeywell Lyric T6R thermostat ngaphezulu kwenyanga, ngaphezulu kweziphumo ezonelisayo. Siya apho kunye neenkcukacha zemveliso.
1 Iimpawu zeHoneywell T6R zoBugcisa
2 Uyilo kunye nezinto zesikhululo se-T6R
3 Ukufakwa kwesiseko sokufumana kunye nokunxibelelana kwibhoyila
4 Ukuseta i-T6R ngefowuni yethu
Iimpawu zeHoneywell T6R zoBugcisa
Imveliso, njengazo zonke ezakhiwe yi-Honeywell, ibandakanya inkqubo ekulula ukuyifaka kunye nokupakisha okuhambelana ngokupheleleyo nophawu olunika igama. Ngokuyintloko Kuya kufuneka sigqamise uLyric T6R kwezi mpawu:
Isikhululo sesikrini sokuchukumisa umbala
Ukusebenza kwe-geolocated / ukucima ukulawulaukubiyela nge-geo)
Amanqanaba eshedyuli yeveki
Ukuhambelana nesiseko, ukudibanisa kunye nokumodareyitha ii-boiler
I-thermostat ine-thermometer yayo, ke nganye ye-T6Rs esiyibeka ekhaya iya kusebenza ngendlela eyahlukileyo. Kwimeko yethu sivavanye iyunithi nganye ebonisa ukuchaneka kubushushu obupheleleyo, asifumananga mpazamo. Ngendlela efanayo, uqhagamshelo lwe-Wi-Fi kunye ne-RF alubonisi kuphazamiseka, inee-eriyali ezingaphezu komgangatho owaneleyo wokusebenzela ekhaya ngaphandle kwengxaki ezidibeneyo.
Uyilo kunye nezinto zesikhululo se-T6R
UHoneywell akoni nangayiphi na indlela ekwakhiweni kolu hlobo lwesixhobo. Yenziwe ngeplastikhi kuphela, into ethi kolu hlobo lwemveliso ixatyiswe ngokuthanda kwayo ukusebenzisa ixesha elide. Ngendlela efanayo sifumana isikrini sokuchukumisa esinombala osisiseko kunye nangaphezulu kokwanele ukwazi yonke idatha echaphazela ukulawulwa kwendalo yekhaya lethu. Ngaphandle kwamathandabuzo, isikhululo sesiseko siyimpumelelo.
Emva koko, ixhunyiwe nge-transformer yenethiwekhi, mhlawumbi kubandakanya enye into ngebhetri egcwalisekayo okanye eshukumayo (indlela yefowuni engenantambo) ngekhe yenzakalise nangona sicinga ukuba uHoneywell uzama ukugcina inkqubo ihlala inxibelelana kwaye ukunqanda iingxaki zokumisela.
Isikhululo ngokwaso siya kusivumela ukuba silawule zonke ezi paramitha sele zikhankanyiwe kwaye ziya kusebenza njengendawo yokunxibelelana phakathi kwefowuni ephathekayo kunye nebhoyila yethu. U-Honeywell ngaphandle kwamathandabuzo wenza umsebenzi ophindaphindiweyo kweli candelo, isikhululo sikhangeleka silungile nakweliphi na ikhaya kwaye sinika lonke ulwazi esiludingayo ngokujonga nje. Kwimeko yethu sivavanye ushicilelo lwe-T6R olungenazingcingo, nangona bekwanodonga, uhlobo lwe-T6.
Ukufakwa kwesiseko sokufumana kunye nokunxibelelana kwibhoyila
Njengoko besesitshilo ngamanye amaxesha, ngokuchanekileyo enye yeendawo apho iHoneywell ihlala ibalasele ngokulula xa ufaka kwaye useta iimveliso zayo. Kwimeko yethu sifumene isifaki se-Honeywell esingaphantsi kwemizuzu engama-40 yonke into sele ilungile kwaye isebenza, kodwa siyilandele ngokusondeleyo inkqubo yofakelo kwaye ilula kakhulu. Sinokukhetha iindidi ezine zofakelo ngokuxhomekeke kwinkqubo yethu yangoku okanye iimfuno zethu:
Iinkqubo zeendlela ezimbini (V4043)
Kwimeko yethu siyifakile kwinkqubo yokubilisa ye-Saunier Duval, ehambelana ngokupheleleyo nenkqubo ye-Honeywell, sPhumeza ukulandela isikimu sokufaka sidibanise iintambo ngoncedo lwe-screwdriver kwaye isiseko besele sisebenza Esi sisiseko esiya kuthi sibeke ecaleni kwebhoyila kwaye inezalathiso ezimbini ze-LEDs kunye neqhosha. Ii-LEDs ziya kusilumkisa ukuba i-boiler iyasebenza kunye nokufumaneka kwenethiwekhi ye-Wi-Fi, ngelixa iqhosha liza kusivumela ukuba siyicime ngqo ibhoyila kwimizuzwana embalwa. Esi sixhobo sisivumela iindidi ezahlukeneyo kwaye asifuni kulibaziseka okugqithisileyo kulawulo lwaso.
Ukuseta i-T6R ngefowuni yethu
Amanyathelo alula kakhulu, ukuthatha nje ithuba kwisicelo seLyric esiphathwayo, esinobunini eHoneywell kwaye esetyenziselwa ukulawula zonke iimveliso zakho zedemos ngokukhangela, zombini i-T6R, inkqubo yekhamera yeLyric C1 kunye nenkqubo yokukhangela ukuvuza kwamanzi esiyihlalutye apha. Isicelo simahla kwaye sinamathuba okwenza ngokwezifiso angapheliyo.
Honeywell Lyric -Izicelo ze-Android kuGoogle Play
Sisebenzisa nje ukhetho ukongeza isixhobo esitsha kwaye silandele imiyalelo eziza kubandakanya ikhowudi ebonisa isiseko sethu seLyric T6R kwaye siyimatanise nenethiwekhi entsha yeWi-Fi esiza kuyisebenzisa ukusebenza nenkqubo yobukrelekrele.
Isicelo sisebenza kakuhle, ukusebenza kwayo kuyamangalisa kakhulu, ukusuka kwinkqubo yokukhusela iminwe (ukubathintela ekufikeleleni kwiikhamera zethu) kunye nokubanakho kwenkqubo kunye nokutshintsha ukusebenza kwebhoyila yethu kwindawo. Isicelo sesona sinika intsingiselo kwipotifoliyo yemveliso, uHoneywell uyakwazi oku kwaye yiyo loo nto isebenze ukuyenza ukuba isebenze ngokufanelekileyo nangokukhawuleza. Awuyi kufuna intshayelelo, inomdla kwaye ujongano lomsebenzisi luyathandeka kwaye lusebenza ngokufanelekileyo. Alithandabuzeki elokuba elinye lamandla emveliso.
Kucacile ukuba uluhlu lweemveliso ezenziwa nguHoneywell kuthi luyavakala ngakumbi xa sidibanisa izixhobo ezahlukeneyo, nangona kunjalo, kufuneka nditsho ukuba sijongane neyona ndlela isebenzayo kunye nenomdla wokulawula imeko yomoya endibenakho ukuyenza. vavanyo. Akukho nto njengokukhululeka kokuthatha ithuba ukubiyela nge-geo Ukuze ibhoyila ivule kuphela xa sisekhaya, kunye nethuba lokongeza abasebenzisi abahlukeneyo kulawulo lweemveliso. Ngokuqinisekileyo, siyifumene imveliso egqityiweyo elawula ukudibanisa eyona nto ilungileyo yohlobo ngalunye kwimveliso eqinisekileyo, enexabiso, kodwa lelona liqabane elifanelekileyo kwikhaya losapho. Ungayifumanaukusuka kwi- € 199,99 kule NGXOLO ukusuka eAmazon, okanye uye ngqo kwiphepha leHoneywell.
Ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza
Isiseko sinokubandakanya iibhetri
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Lyric T6R, sivavanye i-thermostat ye-Honeywell edibeneyo
I-OnePlus ibuyela kwiingcambu zayo kunye nohlelo olukhethekileyo lwe-OnePlus 5T Sandstone White
Uyilo lokugqibela lwe-Samsung Galaxy S9 luhluziwe ngokupheleleyo